| လုံခြုံစွာအွန်လိုင်း Clenbuterol ကုန်ကြမ်းဝယ်ပါ ကုန်ကြမ်းအမှုန့် AASraw
လုံခြုံစွာအွန်လိုင်း Clenbuterol ကုန်ကြမ်းဝယ်ပါ
/သတင္းေၾကျငာခ်က္/Clenbuterol/လုံခြုံစွာအွန်လိုင်း Clenbuterol ကုန်ကြမ်းဝယ်ပါ
အပေါ် Posted 11 / 19 / 2017 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Clenbuterol. ဒါဟာရှိပါတယ်4မှတ်ချက်.
-ဘာဖြစ်သလဲ Clenbuterol ကုန်ကြမ်း
အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် Clenbuterol ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု -Clenbuterol
-ဘယ်လို အွန်လိုင်း Clenbuterol ကုန်ကြမ်းမဝယ် safelfy
Clenbuterol ယင်း၏ Hydrochloride ဆားများတွင်အများဆုံးရရှိနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ် clenbuterol Hydrochloride အမှုန့် (clenbuterol HCL အမှုန့်) ။ ဒါဟာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ excipients မှဆက်ပြောသည်တစ်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည့်အဖြူရောင်အမှုန့်၏ form မှာဖွစျပါတယျ။ ဒါဟာ 68 နာရီတက်ကြွစွာအသက်နှင့် 36-39 နာရီတစ်ဝက်ဘဝရှိပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်၎င်း၏အာနိသင်အတော်လေးရှည်လျားသည်နှင့်စည်းမျဉ်း clen သောက်သုံးသောအတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးသတ်မှတ်ထားသောအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ Clenbuterol HCL ကုန်ကြမ်း 98% ထက်မနည်းတစ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်အတူရောင်းချနှင့် 2years ဦးရေအများဆုံးတည်ငြိမ်ရေးနှင့်အတူနေသည်။ မျိုချမိပါလျှင်, ခန့် 95% အလွယ်တကူလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စုပ်ယူသည်။
Clenbuterol HCl ကုန်ကြမ်းသုံးသပ်ပြီး:
အမည်: Clenbuterol HCL, Clenbuterol Hydrochloride, Clen
CAS အမှတ် 21898-19-1
Clenbuterol အရည်ပျော်မှတ်: 174-175.5 ℃
သိုလှောင်မှုကို Temp .:2-8 ℃
Clenbuterol HCL တစ်ဦး bronchodilator ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမူလကပန်းနာရင်ကြပ်နဲ့တူအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကုသမှုအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ကကြွက်သားတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်အလေးချိန်ကူညီပေးနေကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ becasue သို့သော် Clenbuterol, ကာယဗလအကြားအလွန်ကျော်ကြားသည်။ Clen အဆီဆုံးရှုံးဖို့ကိုကြိုက်သူလူဦးအားဖြင့်ကာကှယျမှုရယူခြင်းဖြစ်သည်။ Clenbuterol အဓိကအားထို့ကြောင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ဦးဆောင်သောဇီဝြဖစ်အဆင့်ကိုပြုစုပျိုးထောင်သည်နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့အပူချိန်တိုးပွါးလာ။ Clenbuterol တစ် repartitionaing အေးဂျင့်နဲ့တူလုပ်ဆောင်နှင့်ကာယဗလဤမျှအများဆုံး clenbuterol အသုံးပြုလို။
အဆိုပါ clenbuterol ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ အရာမြင်ကြပါတယ်ကြွက်သားကြွက်တက်သည်နှင့်အခြားသူများတုန်တုန်ယင်ယင်, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများနှင့်ပျို့ချင်နှင့်ကြီးပြင်းသွေးခုန်နှုန်းရှိပါတယ်။
Clenbuterol ကုန်ကြမ်းအွန်လိုင်း safelfy ကိုဝယ်ခြင်းငှါမညျ
သင်လုပ်နိုင်သည် အွန်လိုင်း clenbuterol ဝယ်ယူရန် sale.You များအတွက်ရောင်းချခြင်းနှင့် clenbuterol များအတွက် clenbuterol HCl ကုန်ကြမ်းများကိုဆိုဒ်များအမြောက်အများရှိပါတယ် becasue သို့မဟုတ်သင် clenbuterol အစားအစာဆေးဝါးကိုဝယ်လျှင်အာဟာရ၏ extension ကိုသူဖြစ်ရမည်သငျသညျမှာရင်ဆိုင်နေရကျန်းမာရေးအန္တရာယ်လူသိများရပါမည်, အွန်လိုင်း clenbuterol ကုန်ကြမ်းမဝယ် အစားအသောက်များတွင်နှင့်မကြာခဏလေ့ကျင့်ခန်း။ သငျသညျဤအရပ်မှသင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူကျန်းမာရေးဖို့အမြဲတမ်းဒဏ်ရာမဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆောင်ဆွေးနွေးရန်သတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာခြောက်လသံသရာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရာမှကာလတိုအတွက်ဒီဆေးဝါးပေးသော်လည်းမှလုံခြုံဖြစ်ရမည်။ သင်အွန်လိုင်း clenbuterol ဝယ်ယူရန်နိုငျသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူအမိန့်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပြီးနောက်။ ထိုအလျှင်သင် အွန်လိုင်း clenbuterol ကုန်ကြမ်းမဝယ်သငျသညျမူဆယ်သငျသညျမှာ facting နေသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စိုးရိမ်ရေမှတ်သိနိုင်မည်။ ဒါကြောင့်ကဲ့သို့သော 98% ထက်မနည်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်အတူ geinius clenbuterol ကုန်ကြမ်းမဟုတ်ဘဲဆင်တူမယ့်အရာတစ်ခုခုသည်ကိုသင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရပါမည် Salbutamol/ albuterol (CAS အမှတ် 18559-94-9) ဖြစ်ပြီးပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများအတွက်အသေးအလို့ငှာပြုပါ, ဒါမှမဟုတ်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အတူတကွ clenbuterol ကုန်ကြမ်းများနှင့် Salbutamol / Albuterol ကုန်ကြမ်းမဝယ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါ clenbuterol ကုန်ကြမ်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်အတူယုံကြည်မှုဟာ clenbuterol HCL ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းလျှင်, သူတို့သည်နမူနာအမိန့်ပေးသို့မဟုတ်ပေးစိတ်ထဲမည်မဟုတ် Salbutamol ကုန်ကြမ်း နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အခမဲ့နမူနာ။
ရေကြောင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်, သင် 1 တပတ်သို့မဟုတ် 10days ထံမှရနိုင်ပါလိမ့်မည်။ တိုင်းပြည်ဥပဒေများ clenbuterol သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေးအပ်ခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အခွအေနေတိုးတက်လာဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာဆေးပညာသာဆေးညွှန်းပေါ်တွင်ဆေးဘက်စတိုးဆိုင်မှာရရှိနိုင်ပေမယ့်အများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကဒီဆေးဝါးမပို့နေကြပါတယ်။ သငျသညျ clenbuterol ဝယ်ဖို့အွန်လိုင်းနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်. လျှင်ဒီတော့သင်ကဆေးညွှန်းထုတ်လုပ်ရန်ချင်စရာမလိုပါ။ clenbuterol ဝယ်ယူရန်ဖို့အကောင်းဆုံးနဲ့ရိုးရိုးလမ်းအင်တာနက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းဆေးဘို့ရှာတွေ့ထားလျှင်, သင်ယှဉ်ပြိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်မှာကို item ရောင်းချကြသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကမြင်လိမ့်မည်။ website အများစုဟာသင်သည်မည်သည့်ဆေးညွှန်း producting မရှိဘဲဤမူးယစ်ဆေးဝယ်ယူရန်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုကျော် clenbuterol Buy အကျိုးအမြတ်တွေအများကြီးပါရှိသည်။
clenbuterol ကုန်ကြမ်းပေးများစွာသော website တွေမှာထိုကဲ့သို့သော WesternUnion, MoneyGram, Bitcoin, ဘဏ်ဝါယာကြိုးအဖြစ်ငွေပေးချေ၏ Modes သာ, အမျိုးမျိုးတို့ကိုအတည်ပြု။ သင်အွန်လိုင်း clenbuterol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဝယ်ယူလျှင်မူကား, သင်က်ဘ်ဆိုက်စစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်မရှိမရှိ verfiy ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင်ဥစ္စာများ၏သတင်းအချက်အလက်များကမ်းလှမ်းလိမ့်မည် becasue သင်လုံခြုံအရောင်းအပေးနေပါသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့လည်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသငျသညျ clenbuterol ဝယ်ဖို့လိုတဲ့အခါသင်က်ဘ်ဆိုက်ကနေအခြားအပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူကြသောအခါအဖြစ်အပေါငျးတို့သနည်းလမ်းများနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကို Condsider ။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များတို့တွင်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်ဖို့သေချာအောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးဤနည်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံး deal.You က်ဘ်ဆိုက်များများများပေးကြသည်ကိုမြင်အံ့သြလိမ့်မည်ရှာတှေ့နိုငျ clenbuterol ကုန်ကြမ်း မြင့် bargain ကုန်ကျစရိတ်မှာ။
Tags: clenbuterol HCL ပစ္စည်းဝယ်ဖို့, clenbuterol HCL ပစ္စည်း, Clenbuterol ကုန်ကြမ်း
1342 Views စာ
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က06 မှာ 24 / 2018 / 8: 50 ညနေ
clenbuterol ဝယ်ဖို့ AASraw ရွေးချယ်ခြင်းညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Doritos06 မှာ 23 / 2018 / 8: 20 နံနက်
အွန်လိုင်း clenbuterol ဝယ်ယူရန်ကြိုးစားနေ im ကြောင့်တစ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်ကဘာလဲ
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က06 မှာ 21 / 2018 / 8: 53 ညနေ
OK ကို, အသေးစိတျကိုအီးမေးလ်အားဖြင့်သင်တို့ရှိရာသို့စေလွှတ်ပြီ
Dario06 မှာ 21 / 2018 / 6: 37 နံနက်
ငါစင်ကြယ်သော hcl clenbuterol ကိုဝယ်ခြင်းငှါအလိုရှိ၏။ 1kg ၏စျေးနှုန်းကဘာလဲ။
HGH သောက်သုံးသော: ဘယ်လိုကျိုးကြောင်းဆီလျော် HGH ၏ဆေးထိုးရှေးခယျြလော မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Oxandrolone (Anavar) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အကုန်ကြမ်း Powder